Kufambiswa kweSarudzo muZanu PF Koshorwa neVamwe, Vamwe Vachifara.
Zvita 02, 2013
WASHINGTON DC — Kunyange hazvo vaitungamira sarudzo dzeZanu PF dzekutsvaga hutungamiri hwematunhu dzakaitwa mukupera kwesvondo vachiti sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka, vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vanoti dzakanga dziine zvimhingamipinyi zvakawandisa kwazvo.
Mumwe wevakakwikwidza kuMasvingo vakakundwa naVaCallisto Gwanetsa, VaAlois Baloyi, vanonzi vakatozivisa kuti havasi kuzotambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti vari kuronga kusvitsa kuPolitiburo yebato ravo zvinyunyuto zvavo, zvinosanganisira kutadziswa kwedzimwe nhengo dzebato kuBikita neGutu kuvhota.
VaBaloyi vanonzi vari kunyunyutawo kuti gwaro revavhoti rakabatwabatwa.
KuMhangura neChinhoyi kuMashonaland West mapurisa anonzi akatozoshandisa simba kuvanhu vakanga voita zvemhirizhonga vachinyunyuta nekushaikwa kwemazita avo pagwaro revavhoti.
Zvinonzi dzimwe nzvimbo dzakawanda mumatunhu akasiyanasiyana dzinewo zvinyunyuto zvekubatwabatwa kwegwaro revavhoti, izvo zvinonzi zvakatadzisa vakawanda kuvhota.
Vamwe vakakunda musarudzo idzi vanoti VaRay Kaukonde kuMashonaland East, VaTemba Mliswa kuMashonaland West, VaCallistus Ndlovu kuBulawayo, VaAmos Midzi muHarare, VaAndrew Langa kuMatabeleland South, naVaRichard Moyo kuMatabeleland North.
Sachigaro weZanu PF, VaSimon Khaya Moyo, vanoti zvasarira kuti Politiburo yavo itambire kana kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vakakunda ava vanofungidzirwa kuti vari kuchikwata chinonzi chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri webato, Amai Joyce Mujuru, kunyange hazvo bato iri richiramba kuti mune zvikwata, chimwe chinonzi chinotevera munyori wezvemutemo mubato, VaEmmerson Mnangagwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Westminster kuLondon, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti mafambisirwo akaitwa sarudzo idzi ndiwo mucherechedzo wemafambisirwo esarudzo dzinoitwa munyika idzo dzinogaronzi hadzifambiswi zvakanaka.
VaRuhanya vanoti zvinyunyuto zvagara zvichichemwa nemapato anenge achipikisana neZanu PF musarudzo, zvakaita sekushaikwa kwemazita pagwaro revavhoti, uye kupindira kwemauto, mapurisa pamwe nevasori munyaya dzesarudzo ndizvo zvinofanirwa kubviswa muZanu PF kuitira kuti zvisakanganisa sarudzo dzemunyika.